Runescape, inonakidza multiplatform yekufungidzira MMORPG | Linux Vakapindwa muropa
Runescape, inonakidza multiplatform yekufungidzira MMORPG
RuneScape ndeye vakawanda vatambi vakawanda online kutamba-vhidhiyo mutambo (MMORPG) inotengeswa naJagex uye inoitwa mumutauro weJava. RuneScape inoitika mune yekufungidzira nyika inonzi Gielinor, iyo yakakamurwa kuita akati wandei humambo, matunhu nemaguta. Vatambi vanogona kufamba kuburikidza neGielinor netsoka, vachishandisa teleportation zvitsinga nedzimwe nzira.
Dunhu rega rega rinopa mhando dzakasiyana dzezvikara, zviwanikwa, uye zviitiko zvinonetsa vatambi. Kusiyana neMMORPGs mazhinji, haina nhoroondo ine mutsetse inofanirwa kuteverwa. Vatambi vari pachiratidziro ndevanochinja maavatat, aine avo vavariro nezvinangwa.
Vatambi vanogona kurwisa zvikara zvese nevamwe vatambi, kuzadza mamishini, wedzera ruzivo rwako mune yega yega hunyanzvi hwe26, kana kuwana goridhe uye zvinangwa zvemuviri. Vatambi vanogona kusangana pamwe nekutengesa, kutaura, kana kutamba mini-mitambo (kurwa kana mushandira pamwe).
Semutambo, zvave zvashanduka pamusoro pemakore kubva pakuda kumhanya kubva pawebhusaiti kuenda kune yakamira yega application apo mutambo une sarudzo yekutamba mahara uye sarudzo yekubhadhara.
Iyo yemitambo interface iri nyore uye inogona kuwanikwa kubva kune akawanda mabhurawuza.
Maitiro ekuisa Runescape paLinux?
Kune avo vanofarira kuisa zita iri pane yavo system, Vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Kana iwe ukashanyira webhusaiti yepamutemo yemutambo, unogona kuwana muchikamu chayo chekurodha masisitimendi emapuratifomu akasiyana akatsigirwa, ayo mune kesi yeLinux vanogadzira vanopa dura. kukwanisa kuisa mutambo nenzira yakapfava muUbuntu, Debian kana kugovera kunobva mairi.
Kuti uwedzere kune iyo system, dTinofanira kuvhura terminal uye mairi tichaenda kutaipa inotevera mirairo:
Panyaya yeavo vari vashandisi veArch Linux, Manjaro, Arco Linux kana chero kumwe kugovera kunoenderana neArch Linux. Ivo vanozokwanisa kuisa Runescape nekunyora kodhi yayo pane system.
Kune izvi isu tinofanirwa kuwana kodhi kubva kuGitHub uye kune izvi isu ticha shandisa iyo terminal kuti tiite maitiro.
Mariri tinofanira kunyora mirairo inotevera:
Waita izvi, ikozvino tave kuzopinda mukodhi folda ne:
Mukati mefaira, tichaenda kuumbiridza nekuisa yazvino package uchishandisa iyo pkgbuild yekuraira.
Zvino, Kune mamwe ese ekuparadzirwa kweLinux, tinogona kushandisa packet tekinoroji Flatpak. Sezvo iyo Runescape mutengi iri imwe yeakawanda emitambo marita ayo akaiswa kune Flathub app chitoro.
Uye neizvozvo zvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux zvinogona kuisa pasuru zviri nyore. Izvo chete zvinodiwa kuti ukwanise kuisa Runescape kubva kuFlathub application chitoro ndeyekuti uve nePlppak rutsigiro rwakawedzerwa kune ino sisitimu.
Kuti ukwanise kuisa pasuru, ingovhura terminal uye mairi ticha kunyora mirairo inotevera:
Chekupedzisira uye kuve iyo yekumisikidza nzira iyo ini pachezvangu yandinokurudzira, iri ne mapakeji anobatsira Snap.
Izvo zvakaringana kuve nerutsigiro rweiyi tekinoroji muhurongwa (Ubuntu uye zvigadzirwa zvayo, mazhinji acho anazvo) kugona kuisa plug-in iyo inopa RuneScape 3 uye Old School RuneScape mune imwechete package.
Sezvo vatengi vepamutemo vanozotorwa chaiko kubva kuJagex pavanotanga kumhanya uye vachamhanya mukati mechirongwa vachishandisa Snap yekupakata tekinoroji.
Kuti uise Runescape pane yako system, ingovhura terminal uye mairi unofanirwa kuita unotevera kuraira:
Uye wakagadzirira nayo, unogona kunakidzwa nemusoro uyu. Usakanganwa kuti zvinoda account kuti uitambe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Runescape, inonakidza multiplatform yekufungidzira MMORPG
MuUbuntu uye zvigadzirwa zviri muchitoro chevapfuuri, haufanire kuwedzera iyo ppa, iyo zvakare isingachashandi:
sudo snap yekuisa runescape
Kana iwe enda kune software application woitsvaga
Pane chero munhu akamboitamba here? Opinions?
Pindura kuna Gustav
Photoflare, yakavhurika sosi yemufananidzo mupepeti mune yakachena Paint maitiro